ओली प्रधानमन्त्रीमै कायम रहे गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, वनमन्त्री, शिक्षामन्त्री कसरी मन्त्रालय जालान् ? Canada Nepal
काठमाडौं । वैशाख १७ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग हुँदा गृहममन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त्यसको विरोध गरेका थिए । उनले दल विभाजनका लागि प्रक्रिया खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याउँदासमेत प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरेका थिए। तर, अहिले बादलले ओलीको साथ छाडेका छन् ।
गृहमन्त्री भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै आएका थापा अहिलेसम्म अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भेलामा सहभागी थिएनन्।
बुधबार भने झम्सिखेलस्थित एक होटलमा भएको प्रचण्ड नेपालनिकट नेताहरूको भेलामा थापा सहभागी भएका थिए। भेलामा ३० जनाभन्दा बढी स्थायी समिति सदस्य सहभागी भएको स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले जानकारी दिएका छन् ।
सो भेलाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसको जिम्मेवारी सचिवालय सदस्यलाई दिइएको छ । सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग जवाफदेही हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले नचाहेका दिन उनीहरू कुर्सीमा बस्नुको कुनै अर्थ हुन्न । एउटै सरकारमा रहेर मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नु त्यति शोभनीय हुन्न ।
तर, अहिले नेकपामा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टबाहेक गृहमन्त्री बादल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउन लागिपरेका छन् । यदि नेकपामा विवाद सुल्झियो भने ती मन्त्री कुन मुखले सरकारमा रहन्छन् ? एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कसरी सहभागी होलान् ? भन्ने विश्लेषण सुरु हुन थालेको छ ।
आषाढ १८, २०७७ बिहिवार ०४:२१:०० बजे : प्रकाशित